काठमाडौंको वैकल्पिक विमानस्थल नागीडाँडा ! | Hakahaki
काठमाडौंको वैकल्पिक विमानस्थल नागीडाँडा !
काठमाडौं । गत वर्ष ६२ लाख यात्रु आवागमन भएको त्रिभुवन विमानस्थलको बढदो हवाई चापलाई स्थानन्तरण गर्ने उद्देश्यले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले मंगलबार काभ्रेको नागीडाँडा र ठूलीचौरको स्थलगत अवलोकन गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
गएको चैत १६ गते पर्यटन मन्त्रालयले सयदिने कार्यक्रममार्फत लुक्लालगायत काठमाडौं पूर्वका लागि हुने आन्तरिक उडानलाई यहाँबाट सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै विमानस्थल निमार्ण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैको कार्य प्रगति हेर्न मन्त्री अधिकारी ३३ औं दिनमा काभ्रेका जनप्रतिनिधि, वायुयान सञ्चालक, विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी, सञ्चारकर्मीसहित स्थलगत अवलोकनका लागि यहाँ आइपुगेका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीसहितको टोलीले बनेपा नगरपालिकाभित्र पर्ने नागीडाँडा र धुलिखेल नगरपालिकामा पर्ने ठूलीचौरको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । यहाँ आइपुगेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्री अधिकारीलाई धुलिखेलमै पर्ने चिसापानी ठूलीचौरको डाँडो पनि अवलोकन गराएका थिए । काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक नागीडाँडा पर्छ । यसको दूरी २५ किलोमिटर रहेको छ ।
त्यसपछि ठूलीचौर ३५ किलोमिटर हाराहारीमा पर्छ भने बनेपा–बर्दिबास सडक खण्डसँग जोडिएको चिसापानी ठूलीचौर काठमाडौं विमानस्थलदेखि ४५ किलोमिटर हारहारीको दूरीमा छ ।
दुवै स्थान अवलोकनपछि आयोजित छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ठूलीचौरको सट्टा नागीडाँडामा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । अहिले ठूलीचौर डाँडा आन्तरिक पर्यटकहरूको घुमफिर केन्द्र र पिकनिक स्पट बनेको छ । धुलिखेल बजारको शिरमा रहेको ठूलीचौर एक मात्र नजिकैको हरियो डाँडो भएकाले विमानस्थल निर्माण गर्न नसकिने जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्री अधिकारीलाई औंल्याए ।
काठमाडौंबाट ९ नटिकलमाइल (१६ किलोमिटर) हवाई दूरीमा रहेको नागीडाँडाबारे ५ महिनाअघि रियलपार्ट इन्जिनियरिङ नाम गरेको परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरेको थियो । प्राधिकरणलाई उक्त परामर्शदाताले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवदेनले नागीडाँडा विमानस्थलका लागि उपयुक्त भनेको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीका ट्रान्सपोट्रेसन इन्जियर गुरुदत्त अधिकारीका अनुसार यो डाँडामा कम्तीमा ८ सय मिटर लामो धावन मार्गसहितको विमानस्थल बनाउन सकिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब हाराहारी लागत आवश्यक पर्नेछ । यसको क्षेत्रफल करिब २५ हेक्टर रहेको छ । ३० देखि ५० मिटरसम्म अग्ला डाँडाको माटो कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ २० वटा साना (टुइनअटर आकारका) विमान पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
अध्ययनले १ सयदेखि ३ सय मिटरसम्म धावनमार्गको चौडाइ निकाल्न सकिने जनाएको छ । कुल क्षेत्रफलमध्ये नौ हेक्टर हाराहारी जग्गा निजी रहेको छ भने बाँकी सामुदायिक वनले ओगटेको सल्ला, कटुस, चिलाउने आदिको वन छ । प्राविधिकहरूले यहाँको धावनमार्गमा लुक्लामा जस्तो एउटा विन्दुमा मात्र नभई दुवैतर्फका विन्दुबाट उडान अवतरण गर्न सकिने जनाएका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार जाडोयाममा काठमाडौंको विमानस्थलमा जस्तो यहाँ हुस्सु लाग्ने गरेको छैन ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले काठमाडौं नजिकै बनाइने विमानस्थलले पोखरा, भैरहवा र सिमरा विमानस्थलाई कुनै असर नपार्ने बताए । ‘विश्वभर हरेक १५ वर्षमा हवाई ट्राफिक दोब्बर भएको देखिन्छ । नेपालमा वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले हवाई ट्राफिक बढेको छ । त्यसैले यहाँ विमानस्थल बनाउन उपयुक्त र आवश्यक देखिन्छ,’ मन्त्रीसँगै काभ्रे आइपुगेका महानिर्देशक गौतमले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
अहिले काठमाडौंबाट पूर्व उड्ने र फर्किने विमान नागीडाँडा माथिको आकाश हुँदै उड्छन् । यदि विमानस्थल निर्माण भए यो रुटलाई सार्न सकिने गौतमले बताए । यसअघि काभ्रेका जनप्रतिनिधिले यो स्थानमा विमानस्थल माग गर्दै आएका थिए ।
तर, प्राधिकरणले हवाई रुटको कारण देखाउँदै नागीडाँडामा विमानस्थल निर्माण गर्न नसकिने जनाउँदै आएको सञ्चार तथा सूचना राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । बाँस्कोटाका अनुसार माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका लोकेन्द्र विष्ट मगरले पहिलोपटक स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकलगायत प्राविधिकहरूले त्यसताका चलिरहेको हवाई रुटका कारण असम्भव भनेका थिए ।
काभ्रेमा ठूलेचौर, नागीडाँडबाहेक (मन्डनदेउपुर) नगरकोट आसापास, पाँचखाल, भकुन्डेबेंसी पनि चर्चामा थिए । तर, प्राविधिकहरूले अन्य चार स्थानमध्ये नागीडाँडालाई धेरै कारणले उपयुक्त भनेका छन् । मन्त्रालयले यी पाँच स्थानमध्ये कुन स्थानमा विमानस्थल बनाउने भनी औपचारिक निर्णय गरिसकेको भने छैन ।
मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका पूर्वइन्जिनियर कमल केसीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाउँदै छन् । उक्त कमिटीको सिफारिसका आधारमा मात्रै स्थान तोकिनेछ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले यो कार्य केही दिनभित्रै हुने बताउँदै आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन हुने भनेका छन् ।